Septambra 6, 2018 Admin
Coinbase mandalina Bitcoin ETF amin'ny fanampiana avy any Blackrock
Coinbase mitady hamorona ny fifanakalozana-varotra vokatra mifatotra ho crypto, araka ny olona tsara ny raharaha, ho toy ny fomba hamela antsinjarany mpampiasa vola mba hahazoana miditra amin'ny tsena mikorontana. Tato anatin'ny herinandro dia natao ny mafy miresaka amin'ny mpikambana ao amin'ny BlackRock ny blockchain vondrona miasa mba tap ho ao an-mafy ny fahaizany amin'ny fandefasana fifanakalozan-varotra entana.
Coinbase Fanondroana efa nanambara ny tahirim-bola, 6 volana lasa izay, ny cryptocurrencies mikendry ny mpampiasa vola ofisialy. ny ETF, na izany aza, dia Mitarika tsikelikely mankany amin'ny mpamatsy vola mahazatra kokoa. Raha Coinbase dia hanana ny crypto ETF, dia mety hiaraka maro hafa ihany koa ny orinasa mitady ny hanomboka ny, anisan'izany ny mpifaninana Gemini, Bitwise Asset Management, ary VanEck.
Tanàna Shinoa mampiasa blockchain ny manara-maso ny fihetsiky ny voaheloka tamin'ny Parole
Voaheloka tamin'ny Parole ao atsimon'ny tanànan'i Zhongshan Shinoa afaka ireo izao rehefa fantarina nandritra ny blockchain Network. Ny rariny departementan'i la Zhongshan milaza fa efa nandefa blockchain-monina rafitra hanara-maso ny fihetsiky ny taloha-voafonja mba hanatsarana ny kalitaon'ny antsoina hoe “fiaraha-monina fanitsiana.”
Parolees dia tsy maintsy hijery sy hamita adidy amin 'izany fanomezana isan'andro ny zava-misy antontan-kevitra momba ny hetsika isaky ny voaheloka, fiaraha-monina izany fanitsiana mpiasa sy ny sampan-draharaha mifanaraka fampiharana ny lalàna izay nomena fahafahana miditra amin'ny tambazotra dia afaka mahalala ny misy azy ny voaheloka na oviana na oviana, ary dia toy izany dia afaka mandray fepetra ilaina raha toa misy fandravana avy amin'ny takiana mahazatra. Ny sampan-draharahan'ny fitsarana nilaza fa ny teknolojia dia afaka mampihena ny enta-mavesatra izay zavatra hafa ilaina mba ara-batana nentim-paharazana manaraka parolees antoka izy ireo, rehefa mankatò lalàna sy manao ny fanompoana fiaraha-monina.
Avo Times manaiky Bitcoin noho ny IPO
Ny boky rongony Avo Times dia manaiky cryptocurrency noho ny mitohy voalohany fanatitra bahoaka (IPO). Avo solontenan'ny Times Jon Cappetta nanamafy fa ny orinasa dia manaiky Bitcoin toy ny fandoavam-bola safidy. Cappetta fa ny fitsipika famenoana (Midika raha tsy izany) natao “mba hahatonga ny SEC sambatra.”
Tsara ny manamarika fa America Fund dia nampiasaina mba mamadika avy hatrany ny crypto ho any US dolara. avo Times’ IPO mihitsy no mandeha tsara, hoy Cap, ary ny orinasa no mijery mivantana lisitra vokatr'izany. “Ny Fitsipika A [fanangonam-bola] dia handeha hanakatona amin'ny faha-12 amin'ity volana ity, ary avy eo dia niala teo izahay, dia hanomboka ny mitanisa ireo dingana” hoy izy.
$172M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Quantstamp Up 50% omaly, A ...